PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - Usengumculi wegqom olaxaze izinkondlo
Usengumculi wegqom olaxaze izinkondlo
Uthembisa umculo ozokuba nomyalezo entsheni
NGINGOWESILISA oneminyaka engu-39 ubudala ocela ukuxhunyaniswa nomunye wesilisa oneminyaka ephakathi kuka-37-45. NGIHIV positive, kangiguli. Ngicela onothando, ngiyaxolisa kwabadlalayo. Ngitholakala kule namba ethi:
063 227 9149.
ULAXAZE ukuhaya izinkondlo wangena emculweni we-gqom usonkondlo oke waqokwa kowesouth African Traditional Music Achievement Awards (Satma) ngo2014. Usenzokhaya uthi naku- ba esazolisebenzisa ikhono lakhe lokushicilela nokuhaya izinkondlo kodwa ubonile ukuthi lo mkhakha kawusabalele kakhulu ethekwini.
“Umkhakha wezinkondlo ethekwini kubukeka kusekuningi okusamele kwenzeke kuwona njengoba ungasabalele ngokwenele kubantu,” kusho yena.
Uthi yilesi sizathu esimenze waqoka ukungena emculweni ikakhulukazi owegqom ngoba yiwona osusabalele futhi ofinyelela kubantu abaningi.
“Umculo wami wegqom ngifuna kujuxuzwe ngawo kube kudlula nomyalezo. Ngifuna igqom yami yehluke ngokuthi yona izokuba nomyalezo ikakhulukazi obhekiswe kubantu abasha,” kusho usenzokhaya obuye abe ngumthwebuli osezakhele igama ezinkundleni zokuxhumana lapho esebenzisa khona igama, imifanekiso Studios.
Kule nkundla uthwebula kakhulu onobuhle bezintokazi ezibuye zibonakale ezikhangisweni nakuma- video ezingoma zabaculi abehlukene.
Uthi uziphilisa ngokuthwebula okuyinto esimakhele igama ikakhulukazi konobuhle abuye abafake ezinkundleni zokuxhumana.
Utshele leli phephandaba ukuthi namhlanje ngesonto uzokwethula ngokusemthethweni ingoma yakhe esihloko sithi, “Isigqila Segqom”. Uthi le ngoma uzoyethula esikebheni esaziwa ngelavue esima emtateni wasethekwini. Lo mculi odabuka emtubatuba, uthi uthando lomculo lumqale esakhula njengoba ebekhonze imilolozelo yasemakhaya.
Uqhuba ngokuthi okwamanje akakazimiseli ngokukhipha i-albhamu kodwa uzodedela izingoma bese kuthi ngokuhamba kwesikhathi anqume ngokuyikhipha (i-albhamu). Uphethe ngokuthi ingoma yakhe isiqalile ukutholakala online kanti nasemsakazweni nasezindaweni zobumnandi isiyezwakala.
Ngifuna igqom yami yehluke...
USENZOKHAYA uzwakalise ukuthi uzosebenzisa ikhono lokushicilela izinkondlo emculweni wakhe wegqom.